फेसबुक शुरुदेखि नै निलो रंग किन ? मार्क जुकरबर्गको आँखा र फेसबुकको रंगबीच यस्तो छ रोचक सम्बन्ध « Asia Sanchar : Nepal News Live
काठमाडौं – अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक संजाल फेसबुक नचलाउने सायाद कमै मात्रामा होलान्। के तपाईले यति धेरै चलाउदा किन फेसबुकको रंग यति निलो छ रु के यो प्रश्न तपाईको दिमागमा कुनैपल्ट उठ्यो विशाल सोसल नेटवर्किङ साइटको सुरूवात भएदेखि यसको रंग निलो छ।
लोकप्रिय सोशल मिडिया कम समयको अवधिमा अरबौं मानिसहरुको जीवनको अंश बनेको छ। अहिले पनि, सुरूवात गरेको वर्षपछि, फेसबुकको वर्तमान डिजाइन पनि आफ्नो मूल डिजाइन जस्तै प्रायः निलो छ। तर किन फेसबुक यति निलो रंगको छ ? त्यहाँ कुनै योजना वा मार्केटिङ रणनीति हामी फेसबुकको रंगको पछाडि रहस्य हेरौं।
विगतका केही वर्षहरूमा फेसबुकले धेरै कुरामा उल्लेखनीय पुनस् डिजाइनहरू गर्यो तर एउटा तत्व जुन कहिल्यै पनि परिवर्तन भएन। त्यो हो वेबसाइटको निलो रंग हो। सबै कुरा यति निलो छ सोशल मिडियामा, फेसबुक सही साइन अप पृष्ठबाट लोगो, तिनीहरूको मोबाइल अनुप्रयोग र पप–अप पनि साइटको निलो रंगको छ।
तर कारण भने एउटै मात्र छ त्यो हो मार्क जुकरबर्ग अरु रंग भन्दा यहि मात्र धेरै देख्छन। फेसबुकको निलो रंग हुनुको पछाडिको कारण के हो भने मार्क जुकरबर्ग कलर ब्लाइन्ड हुनु हो।